Ardeyda soomaalida Göteborg oo dhaqaale gurmad ah iska aruurinaya | Somaliska
Ardeyda soomaalida Göteborg oo dhaqaale gurmad ah iska aruurinaya
Tan iyo markii qaraxa arxan daradda ah lala beegsaday hotel Safari ee magaaladda Muqdisho kuna naf waayeen dad kor u dhaafay seddex boqol oo ruux, waxaa soomaalida caalamka ku dhaqan ay bilaabeen in siyaalo kala duwan ugu gurmadaan dadkii musiibadda ku habsatay.
Dhalinyaradda soomaalida ee dhigata dusigada sare Göteborg, ayaa maanta qaarkodo bilaabay ineey iska arruuriyaan lacago ay ku doonayaan ineey ku tabarucaan dadka qaraxa waxyeelada ka soo gaartay. Mid ka Dhalintan oo laga dareemo sida ay murugada ula qeybsanayaan walaalahood soomaaliyeed ayaa la arkayey iygaoo dhexdooda iska qaadaya lacago aan sidaas u buurneeyn, waxaana qaarkood ay maanta gelinkii dambe bilaabeen ineey daasado qaataan oo ay tagaan goobaha dadku ku badan yahay.
Dhinaca kale baraha bulshadda ayaa waxaa ka socda qeeylo dhaan xoogan oo la xirriira siddii gacan looga geeysan lahaa dadka soomaliyeed ee waxyeeladu ka soo gaartay qaraxaasi. Dhalinyaro leh gabdho iyo wiilaal ayaa barahooda bulshadda ku iclaamiyey qaabka ugu fudud ee ay soomaalida Göteborg qeyb uga noqon karto gurmadka qaran ee loo fidinayo dadka waxyeeladda soo gaartay.
Cabdulahi Saciid oo dhigta mid ka mid ah dugsiayda sare ee Göteborg, ayaa somaliska u sheegay ineey intii awoodooda ah lacago jeebkooda ka arruurinayaan isaga iyo dhalinyarro oo saaxiibadiis ah. Dhalinyaradan ayaa ugu dambeyntii waxaa ka muuqday niyad wanaagsan oo ay walaalahooda ku kaalmeenayaan. Inkastoo Cabdulaahi sheegay in abtigiis uu ka mid ahaa dadkii weli aan nolol iyo geeri la helin isagoo ku sugnaa goobta qaraxa uu ka dhacay ee hoteel Safari.